ချမ်းမြသာစည်တွင် ခြင်ဆေးခွေမှ တစ်ဆင့် မီးကူးစက်လောင်ရာမှ ကလေး တစ်ဦးသေဆုံး၊ ဖခင် မီးလောင် ? - Yangon Media Group
ချမ်းမြသာစည်တွင် ခြင်ဆေးခွေမှ တစ်ဆင့် မီးကူးစက်လောင်ရာမှ ကလေး တစ်ဦးသေဆုံး၊ ဖခင် မီးလောင် ?
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ချမ်းမြသာစည်မြို့ နယ် အောင်သာယာရပ်ကွက်၊ ၄၄ လမ်းနှင့် ၄၅ လမ်းကြား (ပိတောက်နှင့် မြတ်လေး)၊ ရတနာသိဒ္ဓိ ကျောင်းတိုက် ရှေ့လမ်းကြားရှိ အိမ်ရှင် ဦးတိုး၏နေအိမ်တွင် မီး လောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ အိမ်ရှင် ဦး— (၅၅)နှစ်၏ အုတ်ညှပ်၊ နံကပ်၊ သွပ်မိုးနှစ်ထပ်နေအိမ်အောက်ထပ်တွင် မေ ၂၆ ရက် နံနက် ၂ နာရီ ၁ဝ မိနစ်က ခုတင်ဘေး၌ ခြင်ဆေးထွန်းညှိထားရာမှ မွေ့ရာသို့ ကူးစက်ကာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် အိမ်ရှင်၏သား ဖြစ်သူ ဦးအောင်ကျော်စိုး (၃၃)နှစ်မှာ ယာလက်မောင်း၊ ဝဲပေါင်၊ မျက်နှာ၊ ရင်ဘတ်နှင့် ကုပ်တွင် မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အိမ်ရှင်၏မြေးဖြစ်သူ မောင်ဝေယံဖြိုး (၁၂)နှစ်မှာ မီးလောင်ဒဏ်ရာဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည်။
မီးလောင်ရာသို့ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ်ဦးစီးမှူး ဦးသန်း ဇော်ဦး ဦးဆောင်၍ မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ် ၂၄ စီး၊ ရေသယ်ယာဉ်ခြောက်စီး၊ အုပ်ချုပ်မှုယာဉ် နှစ်စီး၊ သန္ဓေ ၇ဝ ၊ အရန် ၁၁ဝ တို့ဖြင့် သွား ရောက်ငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရာ နံနက် ၂ နာရီ ၂၅ မိနစ်တွင် မီးလုံးဝငြှိမ်း သတ်နိုင်ခဲ့ပြီး မီးလောင်မှုကြောင့် ပေ (၃ဝ x ၂ဝ) အုတ်ညှပ်၊ နံကပ်၊ သွပ်မိုး နှစ်ထပ်နေအိမ် တစ်လုံး၊ (၁၅ x ၃ဝ)ပေ အုတ်ညှပ်၊ နံကပ်၊ သွပ်မိုး နှစ်ထပ်နေအိမ်တစ်လုံး၊ ပါဂျဲရိုးကားတစ်စီးဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး စုစုပေါင်း ကျပ် ၈၉၅ဝဝဝဝ ခန့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်ပိုင်ရှင် ဦး—(၅၅)နှစ်အား အောင်ပင်လယ်ရဲစခန်းမှ (ပ)၂၇၉/ ၂ဝ၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ- ၂၈၅/၃ဝ၄(က)ဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
ချစ်သူနှစ်ဦးကို တစ်ပြိုင်နက် မင်္ဂလာဆောင်မည့် သတင်းများကို ရော်နယ်ဒင်ဟို ငြင်းဆန်
ကျပ်သန်းပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော် တန်ဖိုးရှိ လယ်ယာသုံး စက်ကိရိယာများကို မြို့နယ် ၁၂ မြို့နယ်တွင် JICA
တောင်ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်နှစ်ကား ကြည့်ရှုသူ သုံးသန်းကျော်စီ ရောက်ရှိ